2009-07-05 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဖိုင်​ဆိုက် 100 ​အ​ထက်​ရှိ​တဲ့​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို upload ​တင်​မ​လဲ ..
​အ​ခု​ပြော​ပြ​ချင်​တဲ့​အ​ဓိ​က​က​တော့ fileflyer ​ဆိုက်​လေး​ကို ​ကြော​ငြာ​ပေး​ချင်​တာ​ပါ .. ​ဒီ​ဆိုက်​လေး​က 1 GB ​အ​ထိ ​ပို့​ဖို့ ​လက်​ခံ​ထား​ပါ​တယ် .. ​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ​က ​နေ​ရာ​တော်​တော်​များ​များ​မှာ ​ဖိုင်​တင်​ဖို့​ခက်​ခဲ​ကြ​ရ​တယ် .. gmail ​က​နေ ​ပို့​ဖို့​ဆို​တာ​က​လဲ ​ဖိုင်​ဆိုက် ​နဲ​နဲ​ကြီး​သွား​ရင် ​မ​ရ​တော့​ပြန်​ဘူး ... ​အဲ့​ဒီ့​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ ​မေးလ်​သ​ဘော​မျိုး​လဲ ​ဖြစ်​သွား​အောင် . ​ကို​တင်​ပြီး​သား ​ဖိုင်​ရဲ့ download ​လင့်​ကို​လဲ ​ပေး​စ​ရာ​မ​လို​အောင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လဲ​ဆို​ရင် www.fileflyer.com ​က​နေ ​ဖိုင်​ကို ​တင်​ပြီး​တစ်​ခါ​တည်း ​ပို့​ပေး​လို့​ရ​ပါ​တယ် .. ​လုပ်​နည်း​ကို​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ် ..
(၁) http://www.fileflyer.com ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ ..
(၂) ​ပုံ-၁ ​အ​တိုင်း ​လို​အပ်​တာ​တွေ​ကို ​ဖြည့်​လိုက်​ပါ ..
(၃) send ​ကို ​နှိပ်​ပါ .. ​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင် ​ပုံ-၂ ​အ​တိုင်း ​ဖိုင်​ကို ​တင်​နေ​တာ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ ..
(၄) ​ပုံ-၃ ​လို ​လင့်​တစ်​ခု​ရ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .. ​အဲ့​ဒီ့​ရ​လာ​တဲ့ ​လင့်​လေး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ ...
(၅) ​ပုံ-၄ ​လို​မျိုး download ​လုပ်​လို့​ရ​တဲ့ ​အ​ခြေ​အ​နေ​ကို ​မြင်​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ် ..
http://www.megaupload.com/?d=DQW67I4U ​အ​ခု​လို ​လိပ်​စာ​တစ်​ခု​ရ​လာ​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ megaupload ​က​နေ download ​လုပ်​ရ​တော့​မှာ ​အ​သေ​အ​ချာ​ပါ​ပဲ .. ​လုပ်​နည်း​က ​လွယ်​ပါ​တယ် .. ​ရ​လာ​တဲ့ ​လိပ်​စာ​ကို Address box ​မှာ ​ရိုက်​ထည့်​လိုက်​ပြီး enter ​ခေါက်​လိုက်​ပါ .. ​ပုံ​လေး​တွေ​နဲ့ ​ပြ​ထား​ပေး​ပါ​တယ် .. ​ပြီး​တာ​နဲ့ download ​ကျ​လာ​ဖို့ ​ပုံ(၃)​လို ​နဲ​နဲ​တော့​စောင့်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ် . ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​တို့​က ​ဝယ်​သုံး​တာ​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​အ​ကောင့်​ကို ​ဖ​ရီး​သုံး​တယ် . Free ​အ​နေ​နဲ့ ​သုံး​တာ​ဆို​တော့ ​သူ​တို့​သတ်​မှတ်​ထား​တဲ့​အ​ချိန်​ကို​တော့ ​စောင့်​မှ​ရ​မယ်​လေ .. ​ပုံ(၄) ​က​တော့ ​နောက်​ဆုံး​ပုံ​ပါ .. regular download ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ download ​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် ..